यि हुन धेरै पढेका नायीकाहरू, हेर्नुहाेस कसले कति पढेका छन् ? – News Np Online
संचिता लुइटेल :
उनी नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा कुनै समयकी चर्चित नायिका हुन्। जसको अहिले पनि चलचित्रहरुलाई रुचाएको छ। उनले सुपरस्टार निखिल उप्रेतीसगँ विवाह गरेकी हुन्। अहिले उनी २ सन्तानकी आमा भैसकेकी छिन्, सुन्दर नायिका संचिताले पद्मकन्या क्याम्पसबाट समाजशास्त्रमा एम ए गरेकी हुन्।
केकी अधिकारी :
उनी पनि नेपाली चलिचित्र क्षेत्रकी धेरै पढेकी नायिका हुन्। उनले ह्युमन रिर्सोस म्यानेजमेन्टमा स्नातकोत्तर गरेकी छिन्। उनले आफ्नो करियरको सुरुवात चलचित्र “ स्वर“बाट गरे पनि उनलाई मसान चलचित्रले एकाएक चर्चामा ल्याएको थियो । पछिल्लो समय उनको धेरै चलचित्रहरु आइरहेका छन्। त्यसैले केकीले अहिले आफ्नो अभिनय र पढाई दुवैलाइ एकै साथ अगाडि बढाईरहेकी छिन्।
ऋचा शर्मा :
उनी पनि नेपाली चलचित्र जगतमा ब्यवस्थापन सकायंमा स्नातकोत्तर गरेकी नायिका हुन्। ३४ वर्षीकी ऋचाले जर्मनी र फ्रान्समा कलकारिताको पनि अध्ययन गरेकी छिन्। उनले नेपाली चलचित्र “फस्ट लभ“ बाट डेब्यु गरेकी हुन्। पछिल्लो समय मेरो लभ स्टोरी र हाइवेएसँगै थुप्रै चलचित्रहरुमा अभिनय गरिसकेकी छिन्। उनीद्वारा अभिनित लूट र टलकजंग भर्सेस टुल्के सर्वा्धिक रुचाईएको चलचित्र हो।
निशा अधिकारी :
उनी पनि नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा धेरै पढ्ने नायिकाहरुको सूचीमा पर्छिन्। निशाले अमेरिकाबाट फिल्म र सामाजिक विज्ञानमा स्नातक अध्ययन गरेकी हुन्। उनले नेपाली चलचित्र जगतमा मिसन पैसाबाट डेब्यू गरेकी हुन्। तर उनी चलचित्रबाहेक विभिन्न साहसिक कुराहरुमा सहभागी हुन्छिन्। उनले सन् २०१३ मा सगरमाथाको सफल आरोहण पनि गरिन्। उनले क्रिकेटर सरद भेस्वाकरसँग विवाह बन्धनमा बाधिएसँगै एक सन्तानकी आमा बन्न बनिन्। अहिले निशा पति र आफ्नो बच्चासँग अमेरिकामा बस्दै छिन्।
रिमा विश्वकर्मा :
रिमाले चलचित्र क्षेत्रमा अंग्रेजी र मास मिडियामा स्नातक गरेकी मोडल हुन्। उनले चलचित्रमा अभिनय गरेर भन्दा पनि कार्यक्रम प्रस्तोता र मोडल बनेर नै धेरै चर्चा कमाएकी छिन्। उनी बहुचर्चित रियालिटी सो नेपाल आइडोलको प्रस्तोता पनि हुन्।
प्रिंयका कार्की :
उनी पनि ब्यवसायिक चलचित्र छक्का पञ्जाको अपार सफलता पछि र आयुश्मान जोशीसगँको प्रेमसम्बन्धको कुराले अहिले निकै चर्चामा छिन्। उनले नेपाली चलचित्र थ्री लर्वसबाट डेब्यू गरेकी थिइन्। जसको पछिल्लो समय धेरै चलचित्रहरु आइराखेका छन्। उनलाई पनि धेरै फ्यानहरुले धेरै पढेको नायिका भनेर चिन्दछन्। किनभने उनले अमेरीकाको युनिभर्सिटी अफ अलबामाबाट चलचित्रमा डिप्लोमा गरेकी छन्।
दिदि’भाइ’को दो’होरी’लाई यु’टुब’ले दियो उ’त्क्रि’ष्ट स्थान , ज’तात’तै भा*इर’ल भयो ( हेर्नुहोस भिडियो )
झ’ण्डै डेढ क’रो’डले हे’रि’स’केको भि’डि’यो’मा यि यु’व’ती’ले के ग’र्दैछि’न? हे’र्नुहो’स भि’डि’यो